Translate Maori to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Maori to Myanmar (Burmese), Maori to Myanmar (Burmese) translations, Maori to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Tino, pehea koe မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
He tangata? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
He tino aroha ahau kiakoe ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
E hia nga utu o tenei hamburger? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Ka taeaekoe te karanga mai he moti? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Ka pouri ahau ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Tukua ahau တဆိတ်လောက်
Ahau hiahia ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
I roa taku rere အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Kei konei ahau mo te pakihi ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Tena koa, ko toku ingoa မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
E pouri ana ahau, engari kua marenatia ahau ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
E hiahia ana ahau ki te uiui ia koe ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Ka taeaekoe te kawe ki te paparangi rererangi? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
He aha te wa i tenei wa, koa? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Kei hea te teihana pirihimana tata? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Ka taeaeau te tango nama mo to waea waea? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Ka taeaekoe te awhina i ahau? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Tukua he inu moku, koa? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
E hia nga utu? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Kei te mate ahau ki te tumuaki ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Karangatia he taakuta ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Kei reira he taakuta? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Ka taeaeau te karanga? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Karangatia ahau ma to kaiwhakaako pai. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
He pai rawa tenei wahi ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Tangohia ahau ki te hotera pai ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
He aha te tau o taku ruma? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?